Iwu Nzuzo | NAB Show News | 2021 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Mgbasa Mgbasa ozi - Iwu Nzuzo
Nzuzo gị dị anyị mkpa, yabụ na anyị mepụtara Iwu Nzuzo nke nwere ozi dị mkpa dị ka onye anyị bụ, otu na ihe kpatara anyị ji anakọta ozi nkeonwe gị, yana otu anyị si eji ma chekwaa ozi a, gụnyere n'ihe metụtara nnweta gị na iji weebụsaịtị na ngwa anyị (ngwa). Anyị na-arịọ ka ị gụọ ya nke ọma dịka ọ nwere ozi dị mkpa ma kọwaa otu esi akpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Biko biko mara na site na iji ọrụ anyị, anyị chere na ị nwere obi ụtọ maka anyị ịhazi ozi nkeonwe gị dị ka akọwara na Nzuzo Nzuzo a.
Ònye bụ Anyị
Mgbasa mgbasa ozi bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ iji mee ka mgbasa ozi na ihe ọmụma na-ahụ maka mgbasa ozi, ihe nkiri eserese na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Anyi no na 4028 NE 6th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33334. Nọmba ọnụọgụgụ anyị bụ 954-233-1978. Ịnweta anyị n'elu ikpo okwu dị kpọmkwem site na ebe nrụọrụ weebụ anyị www.broadcastbeat.com. Mgbasa mgbasa ozi na-agba mbọ ichebe nzuzo na data nke ndị na-agbaso ọdịnaya anyị.
Ozi Nkeonwe gị
Anyị nwere ekele na ị na-agbaso ozi na ozi anyị nyere ụlọ ọrụ anyị ma tụlee ozi gbasara data gị. Ebumnuche anyị bụ iji hụ na nnyefe anyị dị nchebe yana echedoro nzuzo gị. Na mgbakwunye, mgbe ị na-agagharị na ibe weebụ anyị, anyị na-agbaso nke ahụ maka ebumnuche nyocha dịka ịnwale ọhụụ ọhụrụ, atụmatụ enyi na enyi na isiokwu ndị masịrị gị. Anyị ga-echekwa ozi ọ bụla ị jiri aka gị nyefee; dịka ọmụmaatụ, ozi ịntanetị kọntaktị, aro mmemme, ajụjụ metụtara mmemme na mmemme ụlọ ọrụ, arịrịọ maka ajụjụ ọnụ, akwụkwọ ọcha, webinars na asọmpi.
Nchebe nke data nkeonwe gị
Ihe nzuzo anyị na-agwa gị ihe data onwe gị (PD) na data onwe onye (NPD) anyị nwere ike ịnakọta n'aka gị, otu anyị si anakọta ya, otu esi echebe ya, otu ị ga-esi nweta ma gbanwee ya. Nkwupụta nzuzo anyị na-egosikwa ụfọdụ ikike iwu kwadoro na ị nwere maka nkwupụta data gị.
Mgbe ị na-eji weebụsaịtị na ngwa anyị, ma nyefee anyị onwe anyị, ị nwere ike ịnwe ụfọdụ ikike n'okpuru Iwu Data Protection (GDPR) na iwu ndị ọzọ. Dabere na ndabere iwu maka ịhazi data nkeonwe gị, ị nwere ike ịnwe ụfọdụ ma ọ bụ ikike niile ndị na-esonụ:
Ikike ịmara - I nwere ikike ka agwa gị gbasara data nkeonwe anyị na-anakọta n'aka gị, yana otu anyị si hazie ya.
Ikike nke nnweta - I nwere ikike inweta nkwenye na a na-edozi data nkeonwe gị ma nwee ike ịnweta data nkeonwe gị.
Ikike imezi - have nwere ikike imezi data nkeonwe gị ma ọ bụrụ na ezughi oke ma ọ bụ ezughi oke.
Ikike ihichapu (ikike echefuru) - I nwere ikike ịrịọ iwepu ma ọ bụ hichapụ data nkeonwe gị ma ọ bụrụ na enweghị ezigbo ihe kpatara anyị ga-eji na-edozi ya.
Ikike igbochi nhazi - I nwere ikike 'igbochi' ma ọ bụ machibido nhazi nke data nkeonwe gị. Mgbe amachibidoro data onwe gị, a na-ahapụ anyị ka anyị chekwaa data gị, mana ọ bụghị ịhazi ya ọzọ.
Ikike nke data data - I nwere ikike ịrịọ ma nweta data nkeonwe gị nke ị nyere anyị ma jiri ya maka nzube nke gị. Anyị ga-enye gị data gị n'ime ụbọchị 30 nke arịrịọ gị. Iji rịọ data nkeonwe gị, biko kpọtụrụ anyị site na iji ozi ahụ dị n'elu nke ozi nzuzo a.
Ikike ịjụ - I nwere ikike ịjụ anyị ịhazi data nkeonwe gị maka ebumnuche ndị a: Nhazi dabere na ọdịmma ziri ezi ma ọ bụ arụmọrụ nke ọrụ na mmasị ọha / ọrụ nke ikike gọọmentị (gụnyere nyocha); Direct ahia (gụnyere profaịlụ); na Nhazi maka nzube nke nyocha sayensị na akụkọ ihe mere eme na ọnụ ọgụgụ. Ikike gbasara mkpebi na akpaghị aka akpaghị aka.
Ime mkpebi na ịkọwapụta onye ọ bụla akpaghị aka - will ga-enwe ikike ịghara ịdabere na mkpebi dabere naanị na nhazi akpaaka, gụnyere ịkọwapụta, nke na-arụpụta mmetụta iwu gbasara gị ma ọ bụ otu ihe ahụ metụtara gị.
Na-ezigara ndị ọchịchị mkpesa - I nwere ike iji akwụkwọ nlekọta na-eme mkpesa ma ọ bụrụ na akọwaghị ozi gị na nrube isi Iwu Iwu Nchekwa Data. Ọ bụrụ na ndị isi nlekọta anaghị edozi akwụkwọ mkpesa gị nke ọma, ị nwere ike ịnwe ikike ikpezi ikpe. Maka nkọwa gbasara ikike gị n'okpuru iwu, gaa na nleta www.privacyshield.gov/
Anyị agaghị enye ndị mmanye iwu data na-enweghị iwu ụlọikpe. Mee nke ahụ, anyị ga-anwa ịgwa gị maka arịrịọ ahụ ma ọ bụrụ na a gbochiri anyị ime otú ahụ.
Mgbe ị na - eji Beatcast Beat anyị nwere ike iji "kuki", "mgbama weebụ," yana ngwaọrụ ndị yiri ya iji soro ọrụ gị. A na-echekwa ozi nta ndị a na draịvụ ike gị, ọ bụghị na ebe nrụọrụ weebụ Broadcast Beat.
Anyị na-eji kuki iji nyere gị aka ịnyagharịa weebụsaịtị Beat Beat n'ụzọ dị mfe dị ka o kwere mee, na icheta ozi gbasara nnọkọ gị ugbu a. Anyị anaghị eji teknụzụ a eme nledo gị ma ọ bụ na-awakpo nzuzo gị. Nwere ike iwepu kuki na teknụzụ nyocha site na ihe nchọgharị weebụ gị.
Nchekwa na Nchekwa
Mgbasa ozi Broadcast Beat nwere usoro nchekwa nke ụlọ ọrụ iji chebe ọnwụ, ojiji na mgbanwe nke ozi dị n'okpuru anyị. Ọ bụ ezie na enweghị ihe dịka “nchekwa zuru oke” na ịntanetị, anyị ga-ewere usoro niile dị mma iji hụ na nchekwa nke ozi gị.
A na-ezoro data niile site na SSL / TLS mgbe ebusara n'etiti sava anyị na ihe nchọgharị gị. Enweghị ihe ezoro ezo data data anyị (n'ihi na ọ dị mkpa ịnweta ngwa ngwa), ma anyị na-aga ogologo iji hụ data gị na ezumike.
Anyị agaghị ere ma ọ bụ ịkekọrịta data a na nke atọ ọ bụla.
Anyị na-edebe backups, haziri maka nhụsianya usoro mgbake, maka ụbọchị 30. A na-ehichapụ nkwado ndabere na oge ntụgharị 30. Mgbe a na-agụ ozi ịntanetị ma a zọpụtaghị ya, ha na-ehichapụ ya n'emeghị aka na 30 ụbọchị.
Mgbanwe na Ajụjụ
A ga-edezi ihe a na nkwupụta a na URL a ma ga-adị irè mgbe ezitere ya. Ịga n'ihu iji saịtị a na-agbaso ọkwa nke mmegharị ọ bụla, mgbanwe, ma ọ bụ mgbanwe ga-abụ nkwenye gị maka mmezi ahụ. Anyị ga-agwa gị banyere mgbanwe dị ukwuu site na ịchọta onye nwe akaụntụ ma ọ bụ site na itinye ọkwa mara ọkwa na saịtị anyị. Ọ bụrụ na ịnwere ajụjụ gbasara nkwupụta nzuzo a ma ọ bụ mmekọrịta gị na Broadcast Beat, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na [email protected].